RW Rooble oo qabanaya doorashadii uu rabey Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
9 April 2021 Doorashada lama faragelin karo: Waraaq ay Dowladda Farmaajo u dirtay UN
9 April 2021 Puntland oo eed usoo jeedisay DF
9 April 2021 Howlgal xooggan oo ka socda koofurta gobolka Galgaduud
9 April 2021 Wiil dhallinyaro ah oo lagu dilay magaalada Cadaado
9 April 2021 Qaar kamida askarta CXDS oo la dallacsiiyay
9 April 2021 Maxkamada sare ee Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xeryaha Qaxootiga
9 April 2021 Kiiskii guddoomiye Dhagajuun: DF oo dabooleysa xaqiiqda
9 April 2021 Dadaallada Beesha Caalamka oo sii socda
9 April 2021 Heshiis laga gaaray colaadda Soomaalida iyo Canfarta
RW Rooble oo qabanaya doorashadii uu rabey Farmaajo
Wuxuu sheegay inaan loo joojin doonin Jubbaland iyo Puntland, oo la qabanayo doorashadda, hadalkaas oo dad badan ku tilmaameen mid halis ku ah mustaqabalka umadda oo sugayay doorasho nabdoon iyo hogaan cusub.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa Saakay oo Sabti ah shaaciyay in doorashadda Baarlamaanka ay ka dhici doonto Galmudug, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Muqdisho, isagoo meesha ka saarey Jubbaland iyo Puntland oo khilaaf kala dhaxeeyo Villa Somalia.
Go'aankan ayuu ku dhawaaqay kadib markii xalay xafiiskiisa kula kulmay Madaxda Galmudug Qoor Qoor, Hirshabeelle Guudlaawe, Koonfur Galbeed Lafta-Gareen iyo duqa Muqdisho Cumar Filish.
Waxay isla meel dhigeen go'aan gurracan, oo horseedi doono in dalka uu gala marxalad fowdo ah iyo inay burburto dowladnimadda mudada 20-ka sano laga soo shaqeynayay dhismaheeda tan iyo Shirkii Carta 2000.
Rooble ayaa lagu eedeeyay inuu noqday hogaamiye aan go'aankiisa fulin karin, oo laga xukumo Xafiiska Madaxweynaha iyo Nabad Sugida, taasoo caddeyn uu ah inuu qaadi waayay tallaabo tanaasul ah oo ku kala dirayo gudiyadda doorashooyinka, si uu u qanciyo dhinacyada kasoo horjeeda.
Hadii doorashadda ka dhacdo Saddex Maamul Goboleed iyo Muqdisho, oo aysan qeybaha kala ee dalka ka maqan yihiin iyo Mucaaradka, maxay noqon doontaa dowladda cusub ee imaan doonto? Waa su'aal ay shacabka is waydiinayaan.
Farmaajo ma doonayo inuu sameeyo gudi hufan oo xalaal ah oo doorashadda u qabta si xor iyo xalaal ah, oo loo dhan yahay, waayo wuxuu dejistay qorshe uu kusoo laabanayo, mana doonayo inuu kursiga ka dego.
Musharixiinta Mucaaradka horey waxay u sheegeen inay qaban doonaan doorasho barbar socota mida Farmaajo, taasina ay halis gelinayso dalka amnigiisa iyo wadajirkiisa oo cago badan hadda ku taagnayn.
Hogaamiyeyaasha Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxay ku shaqeeyaan amarka uga yimaada Muqdisho, maadaam ay yihiin madax maqaar saar ah oo meesha ay keensatay Villa Somalia, iyadoo shacabka Soomaaliyeed wada ogyihiin sida ay u dhacday doorashadooda.
Farmaajo ayaan illaa hadda ka hadlin muranka doorashadda ka taagan iyo mushkiladda siyaasadeed uu uu ku jira dalka uu Madaxweynaha u yahay, taasina waxay muujinaysaa dhaqan kaligii-talisnimo ah.
Jubbaland iyo Puntland waa labo Maamul oo muhiim uu ah doorashadda, waxayna maqnaashiyahooda keenaysaa in dowladda la dhisayo ay Muqdisho kaliya ka taliso, caqabadna ku noqoto la dagaalanka Al-Shabaab.
Magaaladda Muqdisho waxaa ku sugan 14 musharax oo ogol wadahadal iyo xalka dhibaatada dalka ka taagan si wadajir ah loo wajaho, laakiin dhinaca Villa Somalia kama jiro rabitaan noocaas ah iyo tanaasul.
Kala qeybsanaanta iyo khilaafyada jira waxay fursad siinaysaa Al-Shabaab oo suurta-gal ah inay dib ula wareegyo meelihii sida dhabka badnayd looga saaray xili Ciidanka Mareykanka oo culeys ku ahaa Kooxdan ay baxayaan bishan.
0 Comments Topics: rooble soomaaliya